पढाउने ‘मास्टर’ले व्यापार गर्न नपाउने | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← झा र अर्याललाई केन्द्रीय सदस्य, शेर्पालाई वैकल्पिक
आँप खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! →
पढाउने ‘मास्टर’ले व्यापार गर्न नपाउने
Posted on 09/06/2013 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
खाली समयमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ : शिक्षक
२६ जेठ, काठमाडौं । घरमै पाकेको भात खाएर नजिकको स्कूलमा १०-४ को ‘ड्युटी’ गर्ने शिक्षकको तलब त्यति नराम्रो छैन । प्राथमिक तहमा पढाउनेको न्यूनतम तलब १३ हजार ६ सय ५०, निम्न माध्यमिकको १४ हजार ४ सय ८० र माध्यमिक तहको १८ हजार ७ सय ९० रुपैंया छ । दुर्गमभत्ता र अरु सेवासुविधा पनि थप हुन्छन् । अझ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान लगायतका मुख्य विषय पढाउने शिक्षकले त कोचिङ र ट्युनशनबाट पनि उत्तिकै कमाउँछन् । यसो हिसाब गर्दा शहरमा जागिर खानेको भन्दा गाउँमा सरकारी स्कूल पढाउनेको तलब निकै राम्रो छ ।
तलब सुविधा राम्रो भए पनि धेरै शिक्षक शिक्षण पेशामा मात्र आवद्ध छैनन् । गाउँठाउँमा च्याउसरी खुलेका वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वन उपभोक्ता समिति लगायतमा शिक्षकहरुकै हालीमुहाली छ । संस्थामा बसेर हिसाब-किताबलगायतका काम गर्ने राम्रो मान्छे अरु नहुने भएकाले शिक्षकलाई नै राख्नुपर्ने हुन्छ । अझ कतिपय संस्थामा शिक्षक आफैं संचालक छन् । त्यसैले केही शिक्षक रहरले र केही बाध्यताले शिक्षण बाहेकका अरु पेशा व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । कतिपयले स्वयंसेवा गरेपनि व्यापार, व्यवसायमा लागेका शिक्षकको कमाइ राम्रो छ ।
हुन त शिक्षक मात्रै होइन, अरु धेरै निजामति कर्मचारी र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नेले यसैगरी अरु संघसंस्थामा बसेर काम गरिरहेका छन् । थप काम र व्यापार व्यवसायबाट राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन् । तर शिक्षकलाई चाहिँ सरकारले अब थप काम गर्न नदिने भएको छ ।
यसअघि सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले व्यापार व्यवसाय पनि गर्न नपाउने नियम लगाएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक सहकारी, उपभोक्ता समूह लगायतमा काम गरेको थाहा भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न नया नियम लगाउन परेको हो’ शिक्षक विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भन्नुभयो । शिक्षणबाहेक अरु संघसंस्थामा काम गर्दा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो, यो तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।सरकारी शिक्षक भएर पत्रकारिता गर्ने र अन्य विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा काम गर्नेले पनि अब यो काम छोड्नुपर्ने भएको छ । नत्र सरकारले छानबिन गरेर कार्वाही गर्ने बताएको छ ।
सरकारले शिक्षकलाई मात्र पेलेको भन्दै शिक्षक संघ, संगठनहरुले बिरोध गरेका छन् । ‘शिक्षक पनि यो देशको नागरिक हो, विद्यालय समय बाहेक अरुबेला काम गर्न मिल्छ, रोक्न मिल्दैन’ नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जिसीले भन्नुभयो । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था शिक्षकहरुले नमान्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘शिक्षकहरुले विद्यालय समयमा राम्रोसित पढाइरहेकै छन्, खाली भएको समयमा व्यापार-व्यवसाय गर्न किन मिल्दैन’ जिसीले प्रश्न गर्नुभयो ।